I-Raw Synephrine i-HCL ipowder (5985-28-4) Abavelisi - Phcoker
Ividiyo ye-Raw Synephrine HCL (5985-28-4)
I-Raw Synephrine HCL ipowder (5985-28-4) Iinkcukacha
Igama lemveliso I-Raw Synephrine HCL powder
Igama leKhemikhali Synephrine hydrochloride; 5985-28-4; 4- (1-Hydroxy-2- (methylamino) ethyl) phenol, i-hydrochloride;
Iqela leziyobisi I-Fat ilahlekile
Inani leCAS 5985-28-4
I molecular Fi-ormula C9H14ClNO2
I molecular WSibhozo 203.666 g / mol
IMasaisotopic Mass 203.071 g / mol
Ukuxuba Point 147-150 ° C
Point yo kubilisa 341.10 ° C. @ 760.00 mm Hg (est)
Aukuguquka Ngokuqinisekileyo iindawo ezivuthayo ezinqamlekileyo zatye
Raw Synephrine hcl i powder (5985-28-4) Inkcazo
I-Raw Synephrine i-HCL ipiliti yendalo eyenziwa yi-alkaloid yamakhemikhali yendalo ifumene izityalo kwaye ikhutshwe ukuze isetyenziswe. Ngezinye izihlandlo iSynephrine ibizwa ngokuba 'yelunyu elibuhlungu' njengoko itholakala kwiimononci ezincinci. Enyanisweni, kungokwemvelo kufunyenwe kwintonga ye-orange, kungenxa yoko kuyaziwa njengelunyu. I-orange yamanzi isetyenziselwa inombolo enemiba efanayo kunye nezinye iingxaki zemihla ngemihla ezifana nokulahleka kwesisindo kunye nokuncedisa ekulweni nomlenze womdlali. ngenye yezinto eziphambili ze-orange kunye nokucingelwa ukuba sisiseko seempawu zokuphulukisa izityalo. I-Synephrine HCL ipowder, ngokuqinisekileyo iyona mafutha okutshisa kakhulu amafutha. I-snephrine ifumaneka kwiimonon, kwaye xa unayo, unako inzuzo kuyo yonke indawo yeendlela ezahlukeneyo.
Njengoko isithako sokuncedisa ukutya, i-synephrine i-HCL powder ikhuselekile kubantu abaninzi abadala xa zisetyenziswe kakuhle. Nangona kunjalo, kukho imiphumo emibi phakathi kwabasebenzisi abasebenzisa ezininzi i-synephrine hcl. I-Synephrine iyakhuthaza, ngoko kubalulekile ukuqala kwisilinganisi esiphantsi ukuvavanya ukunyamezela. I-synephrine excessive ngokweqile i-HCL inokubangela ukwanda ngokukhawuleza kwixinzelelo legazi, i-cardiac arrhythmias, ukuxhamla kwesikhumba, ukuhlala, ukungazinzi, ukuphazamiseka, iingxaki zokuphefumula, utywala, iintloko, ukuxubha, ishukela ephantsi kwegazi kunye nokungalingani kwegazi, isisu, isisu, ngokukodwa zidibene nezinye izikhuthazo.
Synephrine hcl powder (5985-28-4) Indlela yokuSebenza
Imiphumo ye-cardiovascular of ligands ihambelana ne-adrenergic receptor ebophayo. Ngokubanzi, xa iigins zibophelela kwi-α-adrenergic receptors, i-vasoconstriction ivela, kwaye xa ibophezela kwi-receptors ye-β1-adrenergic, isivumelwano se-cardiovascular and increased heart rate. Izifundo zibonisa ukuba i-synephrine i-hcl powder ibopha kwi-β3-adrenergic receptors, okubangela ukwanda kwikhono lomzimba lokuphula amafutha. Ukubophelela kwi-β3-adrenergic receptors ayichaphazeli izinga lenhliziyo okanye uxinzelelo lwegazi. Kwakhona, ngenxa yokuba i-synephrine ibonakalisa encinci okanye ayikho into ebophekileyo kwi-α1-, i-α2-, i-β1-, ne-β2-adrenergic receptors kwaye ayibonakali ukuba yenze imiphumo engabonakaliyo, i-cardiovascular effects, njengokwanda kwenani lentliziyo kunye negazi, bafumana amayeza athile, ngokungafani nenani lezinye i-phenylethylamine kunye ne-phenylpropanolamine. Utshintsho oluthile lwezakhiwo lubangela ukubahluko omkhulu kwi-adrenergic receptor ibophe kwaye emva koko ikwazi ukuvelisa imiphumo ye-cardiovascular.
I-Synephrine i-hcl powder iphinda iphinde isebenzise umzimba we-carbohydrates ngokuvelisa amandla amaninzi ngendlela ye-ATP.49-52 Iququzelela ukusetyenziswa kwamaglucose kumaseli omzimba, kunye ne-glycogenolysis, i-gluconeogenesis, i-glycolysis kunye ne-oxygen. Ukubandakanyeka kokubili i-calcium ion kunye ne -AMP ne-adrenergic receptors kuye kwaboniswa ukuba kubandakanyeke kule nkqubo ye-biochemical, kubonisa ukubandakanywa kweendlela ezininzi.
Ngaphandle, ukusetyenziswa kwe-Synephrine hcl powder kuyakuvimbela ukusebenza kwe-NF-kB. Le nto yinto ebalulekileyo ekubangela izifo ezinokubhubhisa ezifana ne-asthma. Ukusetyenziswa kwe-Synephrine powder kuye kwafunyanwa kuthintela isenzo se-eotaxin-1 hormone ngokubanzi. Oku kuvimbela ukunyuka kwe-eosinophil kwindawo echanekileyo.
Nangona kungabonakaliswa kakuhle ngovavanyo, ukusetyenziswa kwe-Synephrine hcl powder kufunyenwe ukuvimbela isenzo se-acetylcholinesterase. Le khemikhali iyaziwa ngenxa yesifo se-Alzheimer.
benefits kaSynephrine hcl i powder (5985-28-4)
I-Synephrine hcl yokulahleka kwesisindo
I-Synephrine hcl inceda ukulahlekelwa yindlala
I-Synephrine hcl yandisa i-muscular glucose
I-Synephrine hcl i-glycogenesis engabonakaliyo
I-Synephrine hcl inceda ekulawuleni isifo sikashukela
I-Synephrine hcl yenza ngcono ukugaya
I-Synephrine hcl iphucula amaqondo kunye namanqanaba emandla
I-Synephrine hcl inceda ukulawula iibhaktheriya ezinobungozi
I-Synephrine hcl incedisa ukunciphisa
Ukhuthazwe nguSynephrine hcl i powder (5985-28-4) Isisombululo
I-Synephrine hcl isisindo esisetyenziswa ngokuqhelekileyo malunga ne-100mg ngosuku. Oku kuthathwa njengeliso elaneleyo lokufikelela ekulahlekeni kwesisindo. Nangona kunjalo, inani eliphakanyisiweyo lokuba nabasebenzisi abaluphelileyo kufuneka bangadluli i-200mg ngosuku. Nantoni na apha ngasentla impawu ithathwa njengetyhefu kwaye iya kubeka umntu umngcipheko wokufumana i-raft yeempembelelo ezichaphazelekayo ezichaphazelekayo ezichaphazelekayo. Kucetyiswa ukuba uqale, 10 ku-20mg ukuqinisekisa ukuba i-Synephrine i-hcl powder ihambelana nomzimba wakho. Emva kokuthatha le milingo yokuqala, kufuneka uthathe ixesha lokuvavanya impendulo yomzimba kwisongezelelo. Ukuba konke kulungile, isilinganiselo sesibini malunga ne-20mg sinakongezwa emva kweeyure ezimbini. Ngaphandle, ixesha elikhuselekileyo lokuthatha isantya lithatha iSynephrine hcl powder kanye emva kweeyure ezimbini.
Imiphumela kaSynephrine hcl i powder (5985-28-4)
Ukusetyenziswa kwe-Synephrine kuhamba kunye nemiphumo emibi njengazo zonke izilwanyana. Xa esinye isibini sisebenzisa i-synephrine hcl kunye kunye ne-caffeine. nazo ziza nemiphumo eminye. Ezi zilandelayo ziphumo zecala eziqhelekileyo:
Ukufa xa kusetyenziswa kumlinganiselo ophezulu ngaphambi kokuhlinzwa.
I-hallucinations / yengqondo
I-Coronary spasms kunye ne-thrombosis
Ukuphazamiseka kwengqondo yomzimba (i-ventricular fibrillation)
Ukunciphisa ubukhulu bemisipha (i-rhabdomyolysis)
Umonakalo wemisipha ngenxa yokunyuka kwengcinezelo kwiimisipha (i-quarateral syndrome syndrome)
Intlungu yesifuba (i-angina ehlukile)